Waa maxay isticmaalka MC nylon |
Naylon Cast waa mid ka mid ah balaastikada injineernimada ee sida aadka ah loo isticmaalo, gaar ahaan dhanka farsamada sida aaladda u adkeysata xirashada iyo yareynta dharka si loo badalo biraha aan diiranayn sida naxaasta iyo aaladaha. 400-kiilo garaam oo waxsoosaarka naylonka ah wuxuu leeyahay mug wax ku ool ah oo u dhigma 2.7 tan oo bir ah ama 3 tan oo naxaas ah. Qaybaha xirashada u adkaysta ee nylon cast ayaa loo isticmaalaa in lagu beddelo qaybaha naxaasta ee asalka ah, taas oo aan kaliya hagaajinaynin waxtarka farsamada, waxay yareysaa dayactirka fudud, laakiin sidoo kale waxay ku kordhisaa nolosha adeegga caadiga ah laba ama saddex jeer. Sidaa darteed, oraahda qiimaha ee qalabka naylonka tuurku wuu hooseeyaa, oraahduna dhowr jeer way ka jaban tahay biraha biraha aan diiranayn. Wax soo saarka ugu muhiimsan waa: gaskooyinka balaastigga ah, tuubooyinka nylon, goomayaasha nayloon, ulaha nayloon, qalabka naylka, qalabka xambaara isweydaarsiga naylon, nayl pulleys, iwm.
Dhanka wax soo saarka, waxaa lagu tuuri karaa 0.2 ilaa boqolaal kiilogaraam. Sababtoo ah qiimaha sare ee qalabka wax lagu duro ee wax lagu duubo iyo wasakhahaasi, adeegsiga naylonka kabka ayaa ah caag cusub oo injineernimo ah oo la soo saaray sannadkan. Waxay leedahay faa'iidooyin ka badan kuwa caadiga ah ee loo yaqaan 'polyamide' (nylon):
1) Awood farsamo sare, iska caabin sare, iska caabin wanaagsan oo wanaagsan, barta dhalaalaysa sare, saliida dhoobada, adkeysiga daxalka iyo u adkeysiga biyaha.
2) Deganaanshaha miisaanka ayaa wanaagsan, oo leh astaamaha is-jilicsanaanta, cabbirka cabbirka kuma koobna.
3) Qiimaha wuu hooseeyaa, cimriga waa dheeryahay, qiimuhuna waa 50% -70% oo kaliya birta aan birta ahayn, cimriguna inta badan wuu ka dheer yahay kan birta.
MC naylon wuxuu leeyahay codsiyo badan oo gaar ah, sida marawaxadaha, qalabka korontada lagu rido, ulaha lagu xiro iyo taarikada hagista mashiinnada caadiga ah. On mashiinada culus sida gacmo-gacmeedka mashiinada macdanta, qalabka wax lagu jajabiyo, ulaha isku xira, gacmo-gacmeedka masafka, fallaaraha mashiinka kiimikada, iwm. Baahiyeyaasha biyaha ee ku dhejinaya munaaradaha qaboojinta, ulaha bistooladaha ee gawaarida gaadiidka, dhaqida shinnida mashiinada cadaadiska, taangiyada shidaalka, faraantiyada wax lagu xirayo, iyo aaladaha ku jira qalabka qalabka, ka hortaga mashiinada inay galaan taangiyada, iwm. , qayb xoog ah, qayb yareysa khilaaf, qayb cadaadis ah, qayb qurxin ama qayb hawlgal ah, waxaa ku ammaanay hawl wade.